Muxuu ka yiri Klopp guul daradii lama filaanka ahayd ee ka soo gaartay Bournemouth? – Gool FM
Liibaan Fantastic December 4, 2016
(Liverpool) 04 Dis 2016 Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ka hadlay guul daradii lama filaanka ahayd ee caawa ka soo gaartay kooxdiisa kooxda Bournemouth.
75-daqiiqo Liverpool ayaa ciyaarta ku hogaaminaysay 3-1 laakiin Bournemouth ayaa samaysay soo laabasho cajiib ah iyaga oo 4-3 ku garaacay kooxda macalin Klopp.
Klopp ayaa sheegay in Bournemouth ay gaartay guul ay u qalantay, wuxuuna intaa ku daray in ciyaartoydiisu ay isdhigteen kadib markii ay hogaanka ku qabteen 3-1.
“Bournemouth waxay gaartay guul ay u qalantay, wuxuu ahaa kulan dagaal ah, waxay dhaliyeen xoogaa goolal ah oo cajiib ah, guushana waa ay u qalmeen” ayuu yiri dhamaadkii ciyaarta.
“Waan guul daraysanay waayo kubadd qurxoon ma aanaan ciyaarin tan iyo markii aan hogaanka ku qabanay 2-0, 2-0 ama 3-1 wali ciyaartu ma dhamaan, Bournemouth waxaan u ogolaanay kubadda, waxaan oo kale waa ay ka dhacaan kubadda cagta”.
“Marka aad ku guda jirto kubadda cagta waad la kulmee natiijadaan oo kale, laakiin waa inaan wax kabaranaa, kuma jiro xaalad fiican laakiin natiijadaan oo kale waa mid aad u baahantahay si ay kuu caawiso”.
“Kaliya waa kulan 3-dhibic ah, suurogal ma ahan inaad horyaalka qaado ama aad ka harto bisha December, waxaan u baahanahay oo kaliya inaan sifiican u adeegsano tayadeena”.
GOOGOOSKA: Everton FC vs Manchester United 1-1 (Mou & Man U oo mar kale lagu dhegey)